Safal Khabar - रोल्पा जिल्लाबाट तीन वर्षमा १६० महिला हराए
रोल्पा जिल्लाबाट तीन वर्षमा १६० महिला हराए
बिहिबार, २६ भदौ २०७६, १४ : ५५
रोल्पा । बितेका ३ वर्षमा रोल्पा जिल्लाबाट १६० महिला हराए । यसरी हराएकामध्ये प्रहरीको मद्दतमा ९५ जना फेला परे भने अझै ६५ जना बेपत्ता छन् । हरेक वर्ष किन यति ठूलो सङ्ख्यामा महिलाहरु हराउने गर्दछन् ? हराएकाहरु कसरी फेला पर्छन् ?
हराएकाहरुका अभिभावकले दिएको सूचनाका आधारमा खोजी गर्न देशभरका प्रहरी युनिटहरुलाई हुलियासहित जानकारी गराउने गरिएको छ । हुलियाकै आधारमा प्रहरीले हराएकाहरुलाई फेला पर्ने गरेको छ । हराएकामध्ये ठूलो सङ्ख्याका महिलालाई प्रहरीले काठमाडौँका ईंटा भट्टामा फेला पर्ने गरेको छ । भट्टामा काम गर्ने गाउँकै नाइकेले ललाइफकाई लैजाने भएकाले अधिकाँश महिला परिवारलाई जानकारी नदिई भाग्ने गरेको पाइन्छ । राम्रो लाउने, मिठो खाने लहडमा दलालको जालमा फसेर परिवारका सदस्यलाई जानकारी नै नदिई भाग्नेको सङ्ख्या ठूलो रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
परिवारलाई अत्तोपत्तो नदिई घर, विद्यालय, पसल, घाँस, दाउरा तथा पँधेराबाटै हराउँदा परिवारलाई मानसिक तथा शारीरिक तनाव हुने गरेको बताइन्छ । हराएका सदस्यको खोजीमा लामो समय बित्ने गरेको अभिभावक वर्गको दुःखेसो छ । यसरी हराएका अधिकाँश महिला वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्न आफूखुशी हिँड्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ । पारिवारिक बेमेलका कारण पनि उनीहरु आफूखुशी घर छाडेर हिँड्ने गरेको बताइन्छ ।
“मादक पदार्थ सेवन सँगै हुने पारिवारिक बेमेलले महिलाहरुलाई घर छाड्न बाध्य पार्छ,” जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक मीना विकले भन्नुभयो । यसरी हिँडेका महिला तथा बालबालिका ईंटा भट्टा, होटेल तथा भारतका विभिन्न स्थानमा रोजगारीमा संलग्न रहने गरेको पाइन्छ ।
घरबाट भागेर हिँडेका तर सम्पर्कमा आउन नसकी अलपत्र परेका कैयौं महिलालाई प्रहरीले उद्धार गरी आफन्तको जिम्मा लगाउने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ईंटा भट्टा जान भनी घरबाट हिँडेर पनि दलालसँग सम्पर्क हुन नसकेका पाँच महिलालाई प्रहरीले आफन्तको जिम्मा लगाएको थियो ।
यसरी अलपत्र पर्नेमा बालबालिकासमेत रहने गरेका छन् । बालश्रमिकहरुलाई नेपाल बाल मजदूर सरोकार केन्द्र सिविनलगायतका संस्थाले समेत उद्धार गरी प्रहरीलाई जिम्मा लगाउने गरेका छन् । त्यस्ता बालबालिका प्रहरीमार्फत परिवारसम्म पुग्ने गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष ललितपुरको एक संस्थाले रोल्पाका एक दर्जनभन्दा बढी बालबालिकालाई ईंटा भट्टाबाट उद्धार गरी प्रहरीे तथा महिला बालबालिका कार्यालयको रोहवरमा आफन्तको जिम्मा लगाएको थियो ।
ईंटा भट्टा गएका महिलाहरु यौन दुव्र्यवहारमा परी बच्चासमेत जन्माउन बाध्य हुने गरेको बताइन्छ । धन कमाउने भन्दै घरबाट भागेर जाने यस्ता महिलामध्ये कतिपय घर फर्कंदा बाबुको पहिचान नखुलेका बच्चा सहित फर्कने गरेका छन् । जिल्लामा पछिल्लो पटक पारिवारिक विखण्डन गर्ने माध्यमको रुपमा समेत यसलाई लिन थालिएको छ । जिल्लामा यस्ता हिंसामा परी बाबुको पहिचान नखुलेका बालबालिकाको सङ्ख्या समेत बढ्दै जान थालेको छ ।
नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि उमेर पुगे पनि बाबुको पहिचान हुन नसक्दा उनीहरुलाई नागरिकता लिन कठिनाइ छ ।
महिला हराउने यो क्रमले परिवारमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने गरेको छ । हराएको लामो समयसम्म अवस्था यकिन हुन नसक्दा उनीहरुको दैनिकीमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको बताइन्छ । खोजीका लागि भन्दै काम छोडेर बारम्बार जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाउनु पर्दा उनीहरुको आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरु नै यसरी हराउने गरेकाले खोजीका लागि त्यस्ता परिवारले थप आर्थिक भार खेप्नुपरिरहेको छ । रासस